न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री आइसोलेसनबाटै फेसबुक लाइभमा - VON TV
न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री आइसोलेसनबाटै फेसबुक लाइभमा
१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०१:३७ 1323 ??? ???????
न्युजिल्याण्ड : न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जकिन्डा अर्डेनले कोरोना भाइरस महामारीबारे घरबाटै फेसबुक लाइभ मार्फत जनताहरुलाई सम्बोधन गरेकी छन् ।
होम क्वारेन्टाइनमा बसेकी जकिन्डाले बुधबार कोभिड १९ बारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएकी हुन् । जब कि, कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सिंगो देश नै आइसोलेसनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक पहिरनमै रहेर घरभित्रबाट भिडिओमा देखिएकी हुन् ।
हरियो जम्परमा देखिएक िप्रधानमन्त्री जकिन्डाले अनौपचारिक पहिरनका लागि माफी समेत मागेकी थिइन् । यस क्रममा उनले आफ्नी छोरीलाई ओच्छ्यानमा राखेर फेसबुक लाइभमा आएको बताएकी थिइन् ।
बुधबार न्युजिल्याण्ड सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई टेक्स्ट म्यासेज पठाउँदै सबैलाई आफ्नो घरमै दूरी कायम गरी बस्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री जकिन्डाको उक्त भिडिओ ३० लाख ५० हजार दर्शकले एकैपटक हेरेका थिए ।
जब कि, न्युजिल्याण्डमा २ सय ८३ जना संक्रमित भेटिएका छन् । तर मृत्युको घटना अहिलेसम्म भएको छैन । तर बुधबार प्रधानमन्त्रीले संक्रमण ह्वात्तै बढ्नसक्ने भन्दै नागरिकहरुलाई सचेत गराएकी थिइन् ।
इटाली र स्पेनलाई पछ्याउदै बेलायत, २४ घन्टामा कोरोना संक्रमित ५६३ को मृत्‍यु
कोरोनाभाइरस महामारी दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो चुनौती – राष्ट्रसंघ महासचिव
कोरोनाको महामारीले थलिएको विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका
कहिलेबाट सुरु भयोे मुर्ख बनाउने खेल ?
अष्ट्रेलिया: कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्यो,संक्रमित ४ हजार ७ सय
व्यक्तिगत बिवरण चुहावट गर्दा युरोप र अमेरिकामा कसले कति जरिवाना तिरे ? के सजाय पाए ?
लकडाउनमा भर्चुअल डेटिङ (भिडियो)